That's so good, right?: God Daddy!
ကိုယ့်ဦးလေးအရွယ် ကိုယ့်အဖေအရွယ်ပုံစံမျိုးတွေနှင့်ပတ်သက်ချင်တဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်ရှိသူတွေကို ကျွန်တော်နည်းနည်းသိတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူတို့လိုမျိုးပဲ အိပ်မက်စိတ်ကူးရှိသူပါ။ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးအိပ်မက်က Randy နှင့်တွေ့ဆုံရချိန်မှာတော့ အမှန် တကယ်ဖြစ်လာပါတယ်။ တစ်ညတာအတွက် Daddy နဲ့တူတဲ့လိင်နတ်ဘုရားပဲဗျ။ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်၊ ကြွက်သားများနှင့်တောင့်တင်း ကြံ့ခိုင်၊ ငွေရောင်ဆံနွယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အမွှေးအမျှင်နည်းနည်းရှိဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးကို အသက် ၁၈နှစ်လောက်ကစပြီး စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တာပါ။ အခု ကျွန်တော့်အသက်က ၂၂နှစ်ဗျ။
ကျွန်တော်ကျောင်းပိတ်ရက် weekend တွေမှာ တစ်ယောက်တည်းအေးအေးသက်သာ ခရီးထွက်ရင်းအပန်းဖြေလေ့ရှိပါတယ်။ Vegas ဒါမှမဟုတ် Sincity လို့ လူသိတဲ့နေရာတွေကိုလေ။ Casino ထဲကိုလမ်းလျှောက်ဝင်သွားရင်း Poker စားပွဲမှာဝင်ထိုင်လိုက်တော့ သူ့ကို တွေ့ရတာပဲဗျ။ ကျွန်တော်ကစားပွဲမှာ ဆက်ထိုင်ချင်နေပေမဲ့ သူ့ကိုမြင်လိုက်ချိန်မှာတော့ စိတိညှို့ခံရသလိုဖြစ်သွားပါရဲ့။ သူက ကျွန်တော့်စိတ်ကူးထဲကအတိုင်း အရာရာပါပဲ။ အရပ်မြင့်တယ်၊ တောင့်တင်းကြံ့ခိုင်တယ်၊ အမွှေးအမျှင်ထူတယ်၊ပြီးတော့ တည်ငြိမ် ရင့်ကျက်တယ်လေ။ သူ့ကြည့်ရတာ တခြား straight ဘဲကြီးတွေလိုဆိုပေမဲ့ မျက်ဝန်းအကြည့်တွေမှာတော့ ဒီထက်ပိုမိုနေသလိုပဲဗျ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးလုံးဟာ တည်းတဲ့ဟိုတယ်က အတူတူပဲဆိုပေမယ့် အရမ်းကာရောတွေ့ဆုံမှုမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူးနော်။
ကျွန်တော် Poker စားပွဲကနေ ဖဲကြဉ် ကျွန်တော့်စိတ်ကူးထဲက daddy ရဲ့အံ့အားသင့်ဖွယ် ညှို့ငှင်မှုကနေပြေးထွက်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဟိုတယ်ကိုပဲသွားလိုက်တာပါ။ စိတ်ထဲထကြွနေတာ တကယ့်ငရဲလိုပါပဲဗျာ။ ဒါကြောင့် Las Vegas က men escort တွေရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုက ဘယ်လိုရှိလဲ စစ်ဆေးဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လေ။ သူတို့ website ထဲဝင်၊ အံ့အားသင့်စေတဲ့ Randy နဲ့ ဆင်တူမယ့်တစ်ယောက်ယောက်ကိုရှာဖွေဖို့ ဆန္ဒပြုရင်းပေါ့နော်။
'Wow! Randy က men escort တစ်ယောက်ပဲဗျ။ ပြီးတော့ တော်တော် HOT!'
ကျွန်တော် ချက်ခြင်းကို Randy နှင့် session တစ်ခုစာ booking လုပ်လိုက်တယ်။ တွေ့ဆုံခြင်းက နောက်တစ်နာရီမှာမှဖြစ်မှာကို ကျွန်တော်ဖြင့်စိတ်မရှည် မစောင့်ချင်တော့ဘူး။ ကျွန်တော် အရာရာသန့်စင်အောင်လုပ်၊ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေအမှန်ဖြစ်လာဖို့ ကျွန်တော့် ကိုယ် ကျွန်တော်ပြင်ဆင်မိတယ်။ တစ်နာရီကြာပြီးနောက် ကျွန်တော်တည်းနေတဲ့ ဟိုတယ်အခန်းရဲ့ တံခါးခေါက်သံတစ်ချက်ကြားလိုက်ရ ပါတယ်။ အခန်းတံခါးအပြင်ဘက်မှာ ရပ်စောင့်နေတဲ့ Randy. သူ့ကိုအခန်းထဲဝင်ခွင့်မပြုမီ ကျွန်တော့်မှာ အသက်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်ရ သေးရဲ့။ ကျွန်တော်တို့ စကားနည်းနည်းတော့ ပြောဖြစ်ကြပါသေးတယ်။ ယူတဲ့ ဒီ session ထဲမှာ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်သလဲ၊ ဘာကို လုပ်တာ မကြိုက်ဘူးလဲ Randy ကမေးပါတယ်။ ခဏနေတော့ ကျွန်တော်တို့ ရင်ခုန်သံမြန်ဖို့ အစပျိုးလိုက်ပါရော။
ကျွန်တော့်နောက်ဘက်ကနေသူအသာချဉ်းကပ်ကာ တင်ပါးတွေကိုပွတ်သပ်တယ်။ ခဏနေတော့ သူ့ရှေ့မှောက်မှာ ကျွန်တော့်ကို ဒူး ထောက်စေသေးတော့တာ။
'ငါ့-ီးကို လေးစားသမှုပြစမ်းပါ...အဲဒါကြီးက မင်းကို တစ်စစီဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်နော်' သူ့ဂျင်းဘောင်းဘီကြပ်ကြပ်က ဇစ်ကိုဆွဲဖွင့်ပြီး မာတောင်နေတဲ့ပစ္စည်းကြီးကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရင်း ပြောပါတယ်။ သူ့ငပဲက ပန်းသွေးရောင်ထနေပြီး တော်တော်တုတ်တယ်...အရသာ တော်တော်ကောင်းမယ့်ပုံပါ။ သူ့ငပဲထိပ်ပေါက်လေးကထွက်နေတဲ့အရည်ကြည်လေးတွေက nectar ကျနေတာပဲ လုံလုံလောက် လောက်ကိုမရှိဘူး တကယ့်နည်းနည်းလေး။ ကျွန်တော် Randy ငပဲကို အရမ်းကောင်းအောင် -ီးပေးပါတယ် တတ်စွမ်းသမျှပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူကတော့ အဲဒါကို အာရုံသိပ်မရဘူးထင်တယ်။ 'ဒါပဲလား မင်းရတာ? ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာ ငါပြမယ်' ဆိုပြီး ကျွန်တော့်အ၀တ်တွေကို ချွတ်ပါတော့တယ်။ အတွင်းခံကိုပါဆွဲချွတ်ပြီးနောက် ဒယ်ဒီက သူ့သားကိုဘယ်လိုကျွေးလဲဆိုတာ စတင်သင်ကြားပါရော။
Randy ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့လည်မျိုထဲထိသွင်းယူလိုက်ပြန်ထုတ်လိုက် လုပ်တာ ချွဲကျိကျိအာရည်တွေတောင် ကြမ်းပြင်ပေါ်ကျတဲ့အထိ ပါပဲ။ ကျွန်တော် ကောင်းကင်ဘုံကိုအလည်ရောက်ပြီပေါ့။ 'မင်းကြိုက်တယ် မဟုတ်လား? ဟုတ်တယ်ဟုတ်'။ ကျွန်တော့်ငပဲကို အားရပါးရ စုပ်မျိုရင်းပြောတာပါ။ Randy ကျွန်တော့်ငပဲထိပ်က အရည်ကြည်လေးတွေ စို့ထွက်လာနေတာကို သူ့လျှာနှင့် တို့တို့ပြီးမြည်းသေး တယ်။ 'ကဲ...အခု ဒီထက်ပိုပြီး ကောင်းအောင် ငါ့နောက်ကလိုက်ခဲ့' Randy က ဘယ်လိုအရသာမျိုးတွေပေးဦးမလဲ မသိဘူး အိပ်ခန်းထဲ နေရာရွှေ့ကြတာပေါ့နော်။ Randy ကျွန်တော့်ကို အိပ်ယာပေါ်ကိုတွန်းလှဲကာ တစ်ကိုယ်လုံးကိုနမ်းပါတော့တယ်။
'အာ..အ' ကျွန်တော့်တင်ပါးအသားဆိုင်တွေကိုဖြဲပြီးတော့ လျှာပူပူနွေးနွေးနှင့် ကလိပြီးမွှေတာဆိုတော့ ကျွန်တော့်ခရေ၀လေးဟာ တံတွေးရွှဲရွှဲနဲ့ ချောဆီဆွတ်သလိုဖြစ်သွားရတာပေါ့။ အတန်ကြာ လျှာနဲ့ကလိပြီးနောက်မှာတော့ သူ့လက်ချောင်းတစ်ချောင်းကို တစ် ကြိမ်ထက်တစ်ကြိမ် ဖိဖိပြီးထည့်ကာ ခရေ၀ကိုချဲ့တယ်။ အစက နာကျင်ပေမယ့် တဖြည်းဖြည်း ဖီလင်ကောင်းလာတယ်လေ။ သူ့လက် ချောင်းတွေရဲ့အတွေ့အရင်ပေးသပေါ့။ သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်ခရ၀ထဲပြစ်မသွင်းခင် ကျွန်တော့်နားရွက်နားတိုးတိုးကပ်ပြောတာက 'မင်း ဒီကိစ္စအတွက်...အသင့်ဖြစ်ပြီလား? ပွတ်သပ်တာ တော်လောက်ပြီ။ ငါ့ လရည်တွေ မထွက်သမျှ မရပ်ပေးနိုင်တော့ဘူးနော်' တဲ့။ နားနား ကပ်ပြီးပြောလိုက်တဲ့ခဏ ကျွန်တော့်တကိုယ်လုံး ကြက်သီးမွှေးညှင်းထက လန့်တဲ့စိတ်ဖြစ်မိသွားပါတယ်။ သူ့ငပဲခပ်ထွားထွားအတွက် ကြောင့်ရောပေါ့။
Randy သူ့ငပဲကို စပြီးသွင်းတာ အဆုံးထိဝင်သွားချိန်မှာတော့ နှုတ်ကမနေနိုင် ညည်းတွားမိပါရဲ့။ သူ့ငပဲကိုတစ်ထစ်ခြင်း ပက်ကျိလိုဖိ သွင်းနေတာ ပြန်ထုတ်တော့လည်း အတူတူ။ ဘယ်လိုခံစားရမလဲစဉ်းစားကြည့် အူထဲ အသည်းထဲက ရွစိရွစိနှင့် ခံစားရတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက 'Yeah! ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးသွင်း...သွင်းပါဗျာ' လို့တောင်းပန်ရတဲ့အထိပါပဲ။
'ဒါကိုမင်းလိုချင်တယ်....လိုချင်နေတယ်...' Randy နှုတ်က ခပ်တိုးတိုးအံကြိတ်သံနှင့်တူတဲ့လေသံနှင့်ပြောတယ်။ 'မင်းလုပ်ချင်တာကို သတိထာားဦးနော် ကောင်လေး...ဟင်းဟင်း' ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲ Lube ဘူးထဲက တော်တော်များများကို ညှစ်ထည့်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ငပဲကို ပစ်သွင်းဆောင့်တာများ ကျွန်တော့်ကိုယ်လုံးကြီး မြှောက်မြှောက်သွားမိရော။ သူ့ငပဲအ၀င်အထွက်ပြုတာမြွေရှည်ရှည်ကြီး မြေကျင်း ပေါက်ထဲကို လျောကနဲ ထွက် တမေ့တမော ပြန်ဝင်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲ။
'အား...အာ..အ...ရှီး' ကျွန်တော် မထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင် လွတ်ထွက်သွားပြီး သုတ်ရည်တွေ ပန်းထွက်မိပါတယ် ကျွန်တော့်ဗိုက်သားပြင် ပေါ်ရွှဲကနဲ။ အိုး....Randy သူ့ငပဲကို ဆွဲထုတ်လိုက်ကာ ခဏငြိမ်နေတယ်။ ပြီးတော့သူ့နှုတ်ခမ်းများဟာ ကျွန်တော့်လည်တိုင်၊ နို့သီး ခေါင်းလေးတွေဆီ၊ နောက်တစ်ခါ ဗိုက်ကြွက်သားများပေါ်က ကျွန်တော့်သုတ်ရည်တွေကို တို့ထိတယ် လျှာနှင့်အကန်ုသန့်ရှင်းရေးလုပ် ပါတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းများကို အငမ်းမရစုပ်နမ်းတော့တာပါပဲ။ 'အရမ်းဆိုးတယ်ကွာ...မင်းက အကုန်ထုတ်ပစ်ပြီ၊ ငါက အခု မှအစပျိုးတုန်းကို' Randy က အားမလိုအားမရပြောတာလေ။ ခဏတော့ သူငြိမ်သက်နေပြီးနော် ခုတင်ဘေးက သူ့အိပ်ကြီးထဲကနေ အနက်ရောင် dildo ကြီးတစ်ခုဆွဲထုတ်ကာ ချောဆီသုတ်လိမ်းပေးရဲ့။ 'မင်းဒီဆိုဒ်ကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပါ့မလား ကြည့်ရအောင်' ဘယ်လို ပြောရ မလဲမသိ အဲဒီပစ္စည်းကြီးကိုကျွန်တော့်ခရေ၀မှထည့်ကာ တဖြည်းဖြည်းဖိသွင်းတော့နာသလိုလို ဖြစ်သွားမိကာ အဆုံးထိဝင်သွား တော့ လည်း ဖင်ကြွက်သားတွေနှင့် ညှစ်ထားမိပါတယ် အလန့်တကြား။
'အို...ဖြည်းဖြည်းဗျ အာ..' သူ့ dildo ကြီးကို အထဲဖိသွင်းလိုက် အပြင်ဆွဲထုတ်လိုက်ဖြည်းဖြည်းလုပ်ရင်းကစားတာ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ် လုံး တုန်ခါကာ တိုးတိုးညည်းညူမိတဲ့အထိ ဖီလင်တွေပြန်အရှိန်တက်လာမိပါတယ်။ သူ့ဟာကြီးကကြီးလိုက်တော့ ကြာကြာထည့်ထား နိုင်ပါ့မလား။ 'Yeah, ကောင်လေး ညှစ်မထားနဲ့အေးဆေးထား' ကျွန်တော့်ခရဝေလေးတော်တော်ကျယ်နေလောက်ပြီ။ သူကျွန်တော့် အထာကိုပေါက်သွားပြီထင့် ဖြည်းဖြည်းလေးဆွဲထုတ်လိုက် ဖိသွင်းထားရင်းမွှေလိုက် လုပ်တာများ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာ ကော့လန်ပြီး မထိန်းနိုင် မသိမ်းနိုင်ဖြစ်မိရတဲ့အထိပါ။ နာကျင်ပေမဲ့ အတော့်ကိုအရသာရှိတဲ့ ထိုးသွင်းမှုပါပဲလေ။
'ကြိုက်တယ်ဟုတ်...Daddy's Toys ကို' သူ့နှုတ်ဖျားကသွားကြားထဲကလေတိုးထွက်လာတဲ့ အသံနှင့် ကျွန်တော့်နားရွက်နားအံကြိတ် ပြောတာများ စားတော့ဝါးတော့မယ့်အတိုင်းပါပဲ။ My God! ကျွန်တော့်သွေးတွေ အရမ်းဆူလာပြီး သူ့လက်ကစားနေမှုဟာ ကျွန်တော့် နှုတ်ဖျားကညည်းတွားသံကိုအဆက်မပြတ်ထွက်စေရော။ သူဘယ်လိုများ ဒီလောက်ကျွမ်းကျင်နေရတာလဲ? 'အ...အာ...Yeah...Daddy!' ကျွန်တော်အားရပါးရအော်ကာ နောက်တစ်ကြိမ် သုတ်ရည်တွေကို ပန်းထုတ်မိရပါပြီ။
Randy သူ့ dildo ကြီးကို ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်တာ ကျွန်တော့်ခရေ၀ခမျာ ကျယ်ပြီး သူ့-ီးကိုသွင်းတဲ့အခါ အခက်အခဲ မရှိတော့ပါ။ သူ ကျွန်တော့်ကို ဒီတစ်ခါ-ိုးတာ တကယ့်ကိုခပ်ကြမ်းကြမ်းပါပဲ။ မွေ့ယာထူထူကြီးတစ်ခုလုံး ရမ်းခါနေတဲ့အထိပဲဗျ။ သူ သိပ် တော့ကြာကြာ မထိန်းနိုင်ပါဘူး အထုတ်အသွင်းခပ်ရမ်းရမ်း ၁၀မိနစ်လောက်လုပ်အပြီးမှာ သူ့ငပဲကိုအပြင်ကိုဆွဲထုတ် ကိုချွတ်ပစ်ကာ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ထည့်သွင်းရင်း စုပ်မှုတ်စေပါတော့တယ်။ 'Yeah! ကောင်လေး...Daddy's cum တွေစားစမ်းကွာ...အ..အ' သူ ကျွန်တော့်ကိုအမိန့်ပေးတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော့်မှာ သီးတောင်သီးတယ် သူ့ငပဲကြီးက ထွားတာကိုးနော်။ ကျွန်တော် သူ့ငပဲခေါင်းကိုလျှာနှင့် ကလိပြီး ပြန်စုပ်မျိုလိုက်ချိန်မှာတော့ 'Ahhh! Yeah...Yeah...Fuck yeah!!!'ကျွန်တော့် ခံတွင်းပူနွေးနွေးထဲ သူ့သုတ်ရည်တွေ ပန်းထည့် လိုက်တာ သူ့ငပဲက ကြီးလွန်းတော့ ပါးစပ်ထဲကနေလျှံကျကုန်တာ အိပ်ယာခင်းပေါ်ရွှဲကုန်ရော။
နှစ်ဦးစလုံး ကျေနပ်သာယာကြပါတယ်။ Randy ကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ သူ့ service ကြောင့်ရော၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်အိပ်မက် Daddy စိတ်ကူးယဉ်မှုကို လက်တွေ့ဘ၀ထဲရရှိခံစားစေတာကြောင့်ရောဖြစ်ပါတယ်။
နာရီလက်တံအချို့ လည်ပတ်သွားပြီးနောက် နှစ်ဦးသားရေချိုးကြကာ ညလယ်စာစားဖြစ်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ သူပြန်သွားတယ်လေ.။
Alex Aung (2 March 2012)
အပြုံးလေး၃နဲ့ help part 4ကိုလည်းဆက်ရေးပါအုံးအကိုရေ။လူကိုညုင်းထားသလိုပဲ။ဖတ်ပြီးသမျှတွေထဲမှာအပြုံးလေးကိုအရမ်းကြိုက်တယ်။အရမ်းromaticဖြစ်ပြီးနှုးညံ့သိမ်မွှေ့တယ်။အကိုblogကိုခုမှစဖတ်ဖူးတာပါ။နောက်လည်းအမြဲတမ်းအားပေးပါ့မယ်အကို။romaticဆန်ဆန်လေးတွေရေးပေးပါနော်။